कुलमानको प्रश्नः बिजुलीको बिल महँगो तिर्नु परेको त छैन? - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कुलमानको प्रश्नः बिजुलीको बिल महँगो तिर्नु परेको त छैन?
काठमाडौं फागुन १२
ऊर्जाको सन्दर्भमा छलफल गर्दा आवश्यकता, वितरण र स्रोत हेर्नु पर्ने हुन्छ। ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरुमध्ये विद्युतपनि एक हो। विद्युतमा पहुँच मात्र होइन यसको आयात र निर्यातको विषयपनि महत्वपूर्ण रहेको छ। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो ठूलो धनी देश भएपनि ६० प्रतिशत नेपाली मात्र विद्युतको पहुँचमा छन्।
उद्योगधन्दा, कृषि, घरायसी काम, यातायातलगायतमा ऊर्जाको प्रयोग हुँदै आएको छ। तर हामीले प्रयोग गर्दै आएको ऊर्जामा विद्युतभने सारै नै न्यून छ। हामीले प्रयोग गर्ने गरेको उर्जाको ३ प्रतिशत मात्र विद्युतले ओगट्ने गरेको छ। यसलाई बढाउनु पर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौं।
हामीले प्रयोग गर्ने ऊर्जामध्ये ग्यास, डिजेल, पेट्रोलमा नेपाल शतप्रतिशत परनिर्भर रहेको छ। नेपालले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको ग्यास, डिजेल, पेट्रोल अन्य देशहरुबाट ल्याउने गरेको छ। यदि नेपाल उर्जामा आत्मनिर्भर हुन सकेमा बाहिर जाने गरेको पैसा नेपालमै रहने थियो। जसका कारण देशका जनताले फाइदा लिन सक्थे। हामीकहाँ ग्यास, डिजेल, पेट्रोल भारतबाट आउँछ। तर भारतले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी अन्य देशबाट ल्याउने गरेको छ। हामीले अरु देशबाट ऊर्जा भित्र्याउनु भन्दा जलविद्युत विकास गर्न सकेमा आत्मनिर्भर बन्न सहज हुने देखिन्छ। १०७ वर्षको जलविद्युतको इतिहास हामीसँग छ। फर्पिङ हाम्रो पहिलो जलविद्युत हो। अहिले हामीकहाँ धेरै जलविद्युत बन्ने क्रममा रहेका छन् भने कतिपय सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
सुन्दरीजल, मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकीलगायतका जलविद्युतका कारण विद्युत आपूर्ति बढेको देख्न सक्छौँ। जब सन् १९९१ पछि निजी कम्पनीहरुलाई पनि विद्युतको क्षेत्रमा सरकारले काम गर्ने नीति बनायो, त्यसपछि विद्युत आपूर्तिमा वृद्धि भएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले गर्दा नेपालले अहिले एक हजार ४६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ। हामीले अन्य देशबाट सुख्खा मौसममा ४ सय मेगाबाट बाहिरबाट विद्युत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसमा कमी ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता नै मुख्य विषयको हो। जसले गर्दा विद्युत उत्पादनमा नेपालआत्मनिर्भर हुन सक्छ।
कुन प्रदेशमा सम्भावना कति?
देश संघीयतामा गइसकेको छ। त्यसैले पनि हामीले कुन प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना कस्तो छ भनेर हेर्न जरुरी छ। प्रदेश १, ३ र ४ जलविद्युतको हिसाबले धेरै सम्भावना बोकोको प्रदेशमा पर्छन्। साथै यी प्रदेशहरुमा अहिले थुप्रै जलविद्युत बन्ने क्रममा छ र सञ्चालनमा आएका पनि यिनै प्रदेशमा धेरै छन्। प्रदेश ५ मा भने जलविद्युत बन्ने क्रममा छन्। प्रदेश ७ मा चिलिमे हाइड्रोपावर सञ्चालनको क्रममा छ। प्रदेश १, ३, ४, ५ र ७ मा जलविद्युतको सम्भावना बढी देखिएको छ भने ६ मा साह्रै कम सम्भावना छ। त्यस्तै प्रदेश २ मा कुनै पनि जलविद्युत अहिलेसम्म छैन।
हामीले ७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेगरी काम गरिरहेका छौ भने ४ हजार मेगावाट पिपिए भइसकेका परियोजना छन्। २७ सयको हाराहारीमा फाइनान्सियल क्लोजर भएर काम अगाडि बढेको अवस्था छ। यी सबै हाइड्रोपावर सञ्चालनमा नआएसम्म हामीलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्न गाह्रो छ। दिउँसो र बेलुकाको समयमा हामीलाई विद्युत सबैमा पु¥याउनका लागि व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ। साथै तामाकोसी हाइड्रोपावर सञ्चालनमा आए बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने विद्युतमा कमी आउनेछ।
तर पनिअहिले हामीले पूरै देशलाई लोडसेडिङमुक्त गरेका छौँ। औद्योगिक क्षेत्रमा भने रातको समयमा कहिलेकाहीँ लोडसेडिङ हुने गरेको छ। यो व्यवस्थापन गर्न सारै गाह्रो छ। व्यवस्थापनमा धेरै कुराले फरक पर्छ। हामीले सकारात्मक सोचेर लोडसेडिङ हुँदैन भन्यौँ भने पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्छ। साथै हामीले धेरै विद्युत प्रयोग हुने सामग्रीहरु प्रयोग कम ग¥यौँ भने पनि समस्या समाधान हुन सक्छ।
अध्ययन गर्नु पर्ने विषय
विद्युतको प्रभावकारिताको विषयमा पनि हामीले छलफल र बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषय हाम्रो अध्ययन र अनुसन्धानमा परेको छैन। यो अध्ययनले नेपालमा विद्युतले कस्तो वातावरणीय प्रभाव पारेको छ, जीवनशैलीमा के परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने विषयलाई समेट्छ। सर्वसाधारणमा यसको पहुँच हुन सक्छ तर चाहिएको मात्रामा विद्युत दिन सकिराखेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषय पनि यसभित्र पर्न आउँछ।
यी विषयहरुमा खासै ध्यान पुर्‍याएका छैनौँ हामीले। हामीले मात्र विद्युत पहुँचको बारेमा कुरा गरेका छौँ। हाम्रो विद्युत सर्वसाधारणले उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन? विद्युत उपयोग गर्दा कतै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा बढी त परिराखेको छैन? यो सबै व्यवस्थापनका लागि हामीले विद्युुत र आइसिटीसँग जोडेर स्मार्ट ग्रिटको अवधारणामा जानु पर्छ। यसमा हामीले काम गर्न पनि थालिसकेका छौँ। यसले सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्छ। स्मार्ट ग्रिटका लागि आइसिटीको ठूलो सञ्जालको आवश्यकता रहन्छ।
(बारबरा फाउण्डेशनले बिहिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
प्रकाशित १२ फागुन २०७४, शनिबार | 2018-02-24 16:21:06